Francs စျေး - အွန်လိုင်း FRN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Francs (FRN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Francs (FRN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Francs ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Francs တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Francs များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FrancsFRN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0104FrancsFRN သို့ ယူရိုEUR€0.00878FrancsFRN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00792FrancsFRN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00944FrancsFRN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0924FrancsFRN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0654FrancsFRN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.229FrancsFRN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0386FrancsFRN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0138FrancsFRN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0145FrancsFRN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.229FrancsFRN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0805FrancsFRN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.056FrancsFRN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.778FrancsFRN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.75FrancsFRN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0142FrancsFRN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0158FrancsFRN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.323FrancsFRN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0722FrancsFRN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.11FrancsFRN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩12.32FrancsFRN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.01FrancsFRN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.757FrancsFRN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.284
FrancsFRN သို့ BitcoinBTC0.0000009 FrancsFRN သို့ EthereumETH0.00003 FrancsFRN သို့ LitecoinLTC0.000191 FrancsFRN သို့ DigitalCashDASH0.000114 FrancsFRN သို့ MoneroXMR0.000117 FrancsFRN သို့ NxtNXT0.81 FrancsFRN သို့ Ethereum ClassicETC0.00153 FrancsFRN သို့ DogecoinDOGE3 FrancsFRN သို့ ZCashZEC0.000126 FrancsFRN သို့ BitsharesBTS0.32 FrancsFRN သို့ DigiByteDGB0.332 FrancsFRN သို့ RippleXRP0.0369 FrancsFRN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000358 FrancsFRN သို့ PeerCoinPPC0.0345 FrancsFRN သို့ CraigsCoinCRAIG4.73 FrancsFRN သို့ BitstakeXBS0.443 FrancsFRN သို့ PayCoinXPY0.181 FrancsFRN သို့ ProsperCoinPRC1.3 FrancsFRN သို့ YbCoinYBC0.000006 FrancsFRN သို့ DarkKushDANK3.33 FrancsFRN သို့ GiveCoinGIVE22.5 FrancsFRN သို့ KoboCoinKOBO2.37 FrancsFRN သို့ DarkTokenDT0.00957 FrancsFRN သို့ CETUS CoinCETI30